Loris Karius Oo U Dacwooday FIFA Talow Dacwadaasi Maxay Ku Saabsan Tahay? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Loris Karius Oo u Dacwooday FIFA Talow Dacwadaasi Maxay Ku Saabsan Tahay?
Goolhayaha kooxda Liverpool amaahda kaga maqan ee Loris Karius ayaa wali ku jira xaalad jaho wareer ah taas oo uga soo bilaabantay finalkii Champions League ee sanadkii 2018 kii.
Loris Karius ayaa caanimadii ugu waynayd ee aduunka ku helay xumaantii noloshiisa kubbada cagta ugu xumayd kadib markii uu sabab u noqday in kooxdii Jurgen Klopp ee sanadkii 2018 kii ay guuldaro kala kulantay Real Madrid finalkii Champions league.
Waxa uu Loris Karius ku soo jiray xaalado jaho wareer ah waxayna taasi ku qasabtay in uu amaah ugu biiray kooxda reer Turkey ee Besiktas halkaas oo uu joogay labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
Laakiin waxaa hadda la xaqiijiyay in Loris Karius uu kooxda Besiktas dacwad ka gudbiyay isla markaana uu xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA uu dacwadiisa gaadhsiiyay.
Mid ka mid ah xubnaha boodka kooxda Besiktas oo magiciisa la yidhaa Erdal Torunogullari ayaa xaqiijiyay in goolhaye Karius uu dacwad u gudbiyay FIFA kadib markii ay kooxdu mushaarkiisa siin wayday wuxuuna dalbaday in la burburiyo qandaraaska amaahda ahaa ee uu Liverpool kaga soo maqnaa.
Goolhaye Loris Karius ayaa FIFA u gudbiyay dacwad ka dhan ah kooxda Besiktas oo uu ku eedeeyay mushaar ayna siin wuxuuna dalbaday in la kansalo heshiiska amaahda ahaa ee uu kooxda reer Turkey ku joogo.
Erdal Torunogullari ayaa yidhi: “Karius waxa uu FIFA u tagay mushaar aan la siin iyo burburinta heshiiskiisa. Waxa uu naga doonayaa in aanu isaga siino mushaarka bilihii aanu ciyaarin. Waxa uu doonayaa in uu baxo kaasina waa go’aankiisa. Ma doonayno in aanu siino mushaar aanu u qalmin”.
Loris Karius iyo maamulka kooxda Besiktas ayaa isku maan dhaafay mushaarka bilihii aan la ciyaarin kulamadii kubbada cagta iyada oo sida hadalka xubinta boodhka kooxdan ka muuqato in ay Loris Karius udiideen mushaarkii uu bilahan qaadan lahaa.
Laakiin Loris Karius ayaa la filayaa in uu ku guulaysan doono kiiskiisa maadaama oo uu heshiiska amaahda ah ee Besiktas uu wali yahay mid jirin ilaa inta la gaadhayo June 30 balse waxa uu goolhayaha reer Germany doonayaa in lacagtiisii bilihii hore la siiyo isla markaana uu haddaba ka dhaqaaqo Besiktas.
Heshiiska Loris Karius ayaa kooxda Besiktas ku qasbi doona in ay lacagtiisa siiyaan maadaama oo aanu doonayn in uu kooxda sii joogo laakiin waxay sii xumaynaysaa jaho wareerkii uu ku soo jiray maadaama oo ay dacwadani waqti qaadan karto.
Si kastaba ha ahaatee, Loris Karius ayaa Liverpool dib ugu soo laaban doona marka ay soo kala dhamaadaan kooxda Besiktas maadaama oo ay Reds wali leedahay mulkiyadiisa.
Rasmi:- Isku Aadka Sideed Dhamaadka FA Cup-ka?